Annaga nagu saabsan - Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd.
Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd waa hormuudka naqshadeynta, horumarinta iyo
capacitors filimada wax soo saarka ee Shiinaha.Waxaan ku hanweynahay inaan leenahay karti, dadaal iyo
kooxda naqshadaynta iyo horumarinta u heellan.
Aragtida iyo Hadalka Himilada
Qiimayaasha shirkadu waxa ay mar horeba gundhigeen xarafkeeda hore (CRE) kuwaas oo ka dhigan wax ku biirinta, xoojinta iyo sareynta.
Himiladayadu waa in aan siino xalal cusub oo loogu talagalay bulshada caalamka si loogu xidho lama huraanka iyo isbeddelka mustaqbalka ee adduunka elektiroonigga ah.
Hadafkayagu waa in aan noqono mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha capacitor ee ugu caansan gudaha iyo dibadda labadaba.
Alaabooyinka iyo Codsiyada
CRE waxay ahayd bixiye caalami ah oo ka mid ah capacitors film metalized tan iyo 2011, bixinta xal la isku halayn karo iyo xirfadeed ee korontada korontada;ku dhex milmay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin automation-ka warshadaha iyo kaydinta tamarta, korontada korontada, gaadiidka tareenka, baabuur koronto iyo tamar cusub oo waara.Lagu kalsoonaan karo, tayada iyo xalalka capacitor la hagaajiyay ee loo habeeyay macaamiisheena ayaa had iyo jeer ahaa mudnaantayada ugu sareysa.
Badeecooyin kala duwan oo capacitor ah ayaa lagu bixiyaa PV / dabaysha korantada, beddelayaasha macdanta, nidaamka korantada tareenka, EPS, UPS, APF, SVG, ilaha sahayda korantada ee gaarka ah, maamulka awooda / gudbinta, nidaamka wadista, E-baabuurta iwm. Inta badan waxaa lagu codsadaa DC-Link, IGBT snubber, resonance-sare-sare, isku-xidhka iyo shaandhaynta AC.
Waqtigan xaadirka ah, CRE waxay leedahay in ka badan 20 shati oo ay shahaado ku siisay Nidaamka Maareynta Tayada ISO9001 iyo TS16949 iyo ururka badbaadada UL.
Macaamiisha, Shuraakada iyo Mustaqbalka
Ma aha oo kaliya shirkaddu waxay u adeegtay macaamiisha gudaha, laakiin CRE waxay soo saartaa alaabooyinka shirkadaha adduunka oo dhan.
2016, CRE waxay heshiis iskaashi istaraatiijiyadeed la saxeexatay DKE, Komishanka Jarmalka ee Korantada, Elektarooniga & Teknolojiyadda Macluumaadka ee DIN iyo VDE.ERC ee korantada elektiroonigga ah waxaa loo aasaasay ujeeddooyin R&D.
Wuxi CRE Tamarta Cusub waxay rajaynaysaa la shaqaynta la-hawlgalayaasha istaraatiijiyadeed ee adduunka oo dhan.Si wada jir ah, waa inaan hogaamin doonaa codsiyada dheeraadka ah ee capacitors filimada ee garoonka elektiroonigga ah, gacan ka geysanaya horumarinta tamarta cusub ee deegaanka-saaxiibtinimo iyo si fiican ugu adeego macaamiisheena caalamka.